आमाको यो क’र्तुत पछि, छोरीले सधैका लागि यो संसारबाट बिदा लीइन ! « गोर्खाली खबर डटकम
आमाको यो क’र्तुत पछि, छोरीले सधैका लागि यो संसारबाट बिदा लीइन !
काठमाडौं। एउटी आमाले आफ्नी छोरीको बिहे आफ्ना प्रेमीसँग गराइदिइन् । छोरीको बिहे गराइसकेपछि पनि उनले ती प्रेमीसँग आफूले पनि अ’वैध सम्बन्ध जारी राखिन् । यो सबै सहन नसकेपछि छोरीले दे’ह’त्याग गरिन् । अहिले मृ-तककी बहिनीले आफ्नी आमावि’रुद्ध दिदीलाई दे’ह’त्यागगर्न बा’ध्य पारेको अभियो गमा उ’जुरी दिएकी छिन् ।आज तकका अनुसार घ’टना है’दराबादको हो । १७ वर्षकी छोरीले दिएको उ’जुरी अनुसार उनकी आमा १वर्षदेखि पितासँग छुट्टिएर
बसेकी थिइन् । यही समयमा उनकी आमा अनिताको पेरम नवीन कुमार नामका एक व्यक्तिसँग अ-वैध सम्बन्ध थियोछोरीका अनुसार ती युवक प्रायः उन को घर आइरहन्थे । नवीनसँगको आफ्नो अ-वैध सम्बन्ध अगाडि बढाउनको लागि अनिताले आफ्नी जेठी छोरीको बिहे नवीनसँग गराइदिइन् ।]केही समयपछि छोरीले यो सब सहन सकिनन् र उनले दे’हत्या’ग गरिन् । छोरीका अनुसार उनकी मृ-तक दिदी हैदराबादको एक कलेजमा पढ्थिन् । गत वर्ष
डिसेम्बरमा उनले आफ्नी आमा र आफ्ना पति नवीनको बीचमा अ-वैध सम्बन्ध रहेको थाहा पाएपछि उनले पतिको घर छोड्ने ध-म्की दिएकी थिइन् । बिहे पछि पनि आमा र नवीनको अ-वैध सम्बन्ध पहिलेजस्तै जारी थियो जसका कारण मृ-तक युवती निकै त-नावमा थिइन् ।अ-वैध स-म्बन्ध जारी रहेपछि उनले आमा र पतिलाई यो सब बन्द नगरे दे’ह’त्याग गर्ने ध-म्की दिएकी थिइन् । तर, उनको ध-म्कीपछि पनि उनीहरुको अ-वैध स-म्बन्ध जारी रहेपछि उनले दिक्कभएर साँच्चिकै दे’ह’त्याग गरिन् । मृ-तककी बहिनीले मिरापेट पुलिस स्टेशनमा उ’जुरी दिएकी हुन् । पुलिसले उ’जुरी दर्ता गरेर का’रवाही अगाडि बढाएको छ ।
यस्तो ठाँउ जहाँ युवतीहरू बिवाहित पुरूषको कान्छी, माईली बन्न तछाड-माछाड
फेरि आठ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् आजको बजार भाउ
मोटोपनले झनै हट एन्ड बोल्ड देखिदै भोजपुरी अभिनेत्री रानी चटर्जी हेरौ तस्बिरमा ।